आहा ! सीको स्वागतमा चिटिक्क काठमाडौं – Khabar Silo
आहा ! सीको स्वागतमा चिटिक्क काठमाडौं
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणलाई लक्षित गरेर राजधानी काठमाडौ बेहुली जस्तै सिँगारिएको छ । दशैं लगत्तै हुने भए पनि कुन दिन काठमाडौं आइपुग्छन् भन्ने औपचारिक घोषणा नभएपनि काठमाडौलाई भने चिटिक्क बनाइएको छ । उनको स्वागतमा काठमाडौंलाई सिगार्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।
काठमाडौंको सडक कालोपत्रे गर्ने, धुलो बढार्ने, सडकपेटीमा रंगरोगन गर्ने लगायतका काम धमाधम भइरहेका छन् । मध्यरातमा सडकमा कालोपत्रे बिछ्याउने चटारोसमेत सरकारलाई यहीबेलामा परेको छ । आम नेपाली नागरिकहरु दशैंमा रमाइरहका बेला पनि काठमाडौं सिँगार्ने काम रोकिएको छैन ।
शनिबार फूलपातिको दिन पनि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा सडकपेटी तथा भित्ताहरु रंगाउने, फ्लेक्स बोर्डहरु राख्ने काममा मजदुरहरुलाई खटाइएको छ । बेला बेलामा अन्तरराष्ट्रिय पाहुनाहरु नेपाल भ्रमणमा आउँदा काठमाडौंलाई यसैगरी सिँगारेर चिटिक्क बनाउने गरिएको छ।
काठमाडौं। जापानी भाषा परीक्षा भोलि(आइतबार)देखि सञ्चालन हुने भएको छ। नर्सिङ केयर (केयर गिभर) का लागि पहिलो चरणको भाषा परीक्षा आइतबारदेखि हुन लागेको हो। जापान फाउनडेसनका अनुसार आवेदन दिएका मध्येबाट परीक्षाका लागि एक हजार जना छानिएका छन्। हजारौंले अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका भए पनि हजार जनाले मात्रै परीक्षा दिन पाउनेछन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा तुलसी सुवेदीले […]
महाअष्टमीको यो महासंयोगमा यी राशि मालामाल : राशिफल/२०७६ असोज १९ गते आइतबार